Guddiga gurmadka masiibadii Puntland oo ari u qaybinaya 672 qoys oo xoolo beelay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Guddiga gurmadka masiibadii Puntland oo ari u qaybinaya 672 qoys oo xoolo beelay (Dhegeyso)
Diseembar 10, 2013 2:06 b 0
Garoowe, December 10, 2013 – Deeganada Puntland waxaa ka socda qorshe balaaran oo lagu doonayo in xoolo loogu qaybiyo dadkii reer miyiga ahaa ee masiibadu haleeshay horaantii bishii ina dhaaftay, markii duufaan roob wadata ay ku dhufatay dhulka Puntland.
Guddiga gurmadka masiibada ee Puntland ayaa bilaabaya qorshahaas, waxaana maalinta khamiista ah ee soo socota la filayaa in gurmad xoolo ah la gaarsiiyo 672 qoys oo reer guuraa ah, kuwaas oo ku xoolo waayey dadkii masiibadu haleeshay.
“wejigii labbaad ee gurmadka ayaa bilowday, waxaan samayn doonaa wax badan oo is bedel ah, waxaa muhiim in ah dadka dib u dejin loo sameeyo.” ayuu yiri sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka hadlay deeq xoolo ah oo la bixin doono.
Guddiga ayaa sheegay in ay bixin doonaan 15 kun oo neef oo ari ah.
Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka mid ah guddiga gurmadka masiibada ee Puntland, waxaa uu saxaafada u sheegay in xoolahaas lagu iibiyey lacagtii laga keenay jaaliyadaha dalalka dibedda ee gurmadka ahayd.
Weli waxaa soconaya gurmadka loo fidinayo dadkii masiibadu haleeshay ee reer Puntland ee ku dhibaataysan dhulka miyiga iyo meelo la dejiyey oo gargaar loogu qaybinayo, culimada ayaa ku baaqay in gargaarka la sii labba jibaaro.
Fowsiyo ?madaxdii shirka Paris waxaan kala hadalnay inay naga tageeraan amniga iyo dhaqaalaha?